निर्वाचनमा मैले जनतामाझ जे बोलेको थिएँ त्यो पूरा गर्छु: सानुकान्छा श्रेष्ठ – USNEPALNEWS.COM
निर्वाचनमा मैले जनतामाझ जे बोलेको थिएँ त्यो पूरा गर्छु: सानुकान्छा श्रेष्ठ
स्याउलेलाई समृद्ध बनाउँछु: सानुकान्छा श्रेष्ठ (चौतारा-साँगाचोकगढी न. पा. – १ जन प्रतिनिधि)
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्याउले गाविसको वडा नम्वर ६ मा माता रत्नमायाँ श्रेष्ठ र र पिता हरिबहादुर श्रेष्ठका कोखबाट २०२४ साल जेठ महिनामा सानुकान्छा श्रेष्ठको जन्म भयो । कान्छो छोरोका रुपमा जन्मिएकाले बाबुआमाले उनको नाम सानुकान्छा नाम राखिदिए । राज्य पुर्नसंरचना अघि स्याउले गाविस छँदा ९ वटा वडा थियो । स्याउले भूगोलको आधारमा ठूलो गाविसमा थियो । राज्य पुर्नसंरचनाका क्रममा स्याउले गाविस चौतारा सँगाचोकगढी नगरपालिकामा गाभियो र नगरकै सबै भन्दा ठूलो वडा सहित १ नम्वर वडा बन्यो । २०७४ को स्थानिय निकायको निर्वाचनमा वडा नम्वर १ मा सानुकान्छा श्रेष्ठले विजयी हाँसिल गरे । निर्वाचित भएपछी अब जनप्रतिनीहरु पार्टीको भन्दा बढी जनताको भएका छन् र हुनैपर्छ । प्रस्तुत छ चौतारा साँगाचोकगढी १ का उनै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधीसँग जितेन्द्र रसिकले गरेको कुराकानी ।
जनतासामु निर्वाचनका बेला जनाएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न थाल्नुभयो ?
पुरा गर्न लागिपर्दैछु । पाँच वर्षको अवधिमा मैले निर्वाचनका बेला जनतामाझ जे बोलेको थिएँ त्यो पुरा गर्छु ।
निर्वाचनमा बोलिएका सबै आश्वासन सत्य हुन्छन् र पुरा गर्न सक्ने देख्नु हुन्छ ?
निर्वाचनमा म जनतामाझ जाँदा कहिल्यै झुठो आश्वासन दिइनँ । त्यसैले म ढुक्क छु मैले जतालाई दिएका वचन पुरा गर्न सक्छु ।
साविकको स्याउले गाविस चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्वर १ बन्यो र तपाई वडाध्यक्षमा निर्वाचित पनि हुनु भो । के कस्तो अवशर र चुनौती देख्नु भएको छ ?
जनप्रतिनिधिबाट जनताले धेरै कामको अपेक्षा धेरै राखेका हुन्छन् । त्यसलाई हामीले साधन र स्रोतले भ्याए सम्म र निती र नियमले दिएका अधिकार प्रयोग गरि विकासका सम्भाव्यताहरु पहिचान गर्दै जनताको आसामा भरोसा भन्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साविकको स्याउलेमा धेरै कुराको चुनौती छ । सडक देखी विजुली सम्म । यो क्षेत्र सदर मुकाम नजिक रहेर पनि विगतमा विकासमा पछि परेकै थियो । त्यसैले यहाँ अवशर पनि छन् र चुनौती पनि ।
गाविस छँदा सदरमुकामबाट ६ किलोमिटर मात्र नजिक रहेको स्याउलेको सडकमा करिव ५ दशक अघिदेखी सवारी गुड्थ्यो । जुनसुकै शाषक आए पनि ध्यान दिएनन् भन्ने आरोप निकै अघि देखिका जनप्रतिनिधिहरुलाई लाग्ने गरेको छ । राज्य पुर्नसंरचनाका क्रममा नाम फेरिए जस्तै काम पनि फेरिन्छ भन्ने विश्वास कसरी दिनु हुन्छ जनतालाई ?
हो विगतमा यहाँको सडकमा यस जिल्लाबाट मन्त्री भएका माननियहरु र नेताहरुबाट आश्वासन मात्र दिए काम भने हुन सकेन । जति भए त्यो देखाउन दाँतको रुपमा देखियो । त्यसैले यहाँका स्थानीय जनता ले यो पटक स्याउलेमा फरक जनप्रतिनिधि चयन गरेर पठाएको छ । यो जनप्रतिनिधिहरुलेचाहिं काम गरेरै देखाउँछ भन्ने विश्वास जितेर हामीलाई पठाएको हामीले मनन गरेका छौं । सोहि अनुरुप हामीले काम गर्न थालिसकेका पनि छौं । अहिले चौतारा पाँचपोखरी मार्ग सडकका लागि १४ दशमलव ७२ किलोमिटर ग्रावेलिङ गर्ने तयारी भइसकेको छ । हामीले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै अगाडी बढेका छौं । आचारसंहिता पनि लागु भइसकेको छ । मंसीर महिनाको अन्तिम तिर टेण्डर हुँदैछ । करिव ३४ करोड ३० लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेटको व्यवस्था भएको छ । यो सडक ग्राभेलिङको काम सँगसँगै पक्की पनि गर्ने सोंचमा हामी छौं । पहिलो चरणमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँको वजेटमा सडकमा ग्राभेलिङको काम हुँदैछ । यो वडामा नयाँ ट्रयाकहरु पनि खोल्नुपर्ने आवश्यक्त्ता देखिएको छ । भूगोलको आधारमा स्याउले चौतारा साँगाचोकगढीको १४ वडा मध्य सबैभन्दा ठूलो वडा हो १ नम्वर वडा । जनताले पाँच वर्षलाई हामीलाई पठाएको छ । पाँच वर्षभित्र जनतामाझ बोलेका अधिकाँश वचन पुरा गछौं ।
चौतारा साँगाचोकगढी वडा नम्वर १ साविकको स्याउलेमा विकासका सम्भाव्यता योजनाहरु चाहिं के के छन् तपाइँसँग ?
चौतारा पाँचपोखरी सडक सुधार योजना त नगरको रातो कितावमा परिसकेको छ । मैले अघिनै भनिसकें । हर्लङवर्लङ र ओखरेनी वाँसखर्कलाई पर्यटकिय क्षेत्रका रुपमा काम गर्ने योजना नगरको रातो कीतावमा पारिसकेको छु । स्थानीय तहले के के गर्न पाइन्छ के के गर्न पाइन्न भन्ने निर्देशिका नआइसकेकाले पनि यी कामहरु गर्न अलि अन्यौलता भने छ । अर्को कुरा चौतारा साँगाचोकगढी १ स्याउले क्षेत्रलाई पर्यटकिय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न होमस्टेका अवधारणाहरु ल्याएका छौं । करिव ३ वटा क्षेत्रमा होमस्टेको अवधारणा आएको छ । त्यस्तै ओख्रेनी क्षेत्रलाई चिया वगानको रुपमा विकास गर्न अवधारण अघि सारेको छु । नेपाल सरकारले नै २०२२ सालको अध्ययनले ओख्रेनी क्षेत्र चिया वगानको लागि उपयुक्त देखाइसकेको छ ।
चौतारा साँगाचोकगढी १ पनि अन्य वडाझै वनजङ्गल र जडीवुटीमा खनिज र पानीमा धनी वडा हो । यसको संरक्षण र उपयोगका लागि के योजना छ ?
बन जङ्गलको स्तर उन्नती गर्न नगरबाटै बन विभागसँग समन्वय भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं । नगरले अवधारणा सार्वजनिक गरि निर्देशन आउनसाथ हामी यहाँका बहुमुल्य बन र जडीबुटीका विषयमा योजनाहरु बनाउने र कार्यान्यवनको चरणमा जानेछौं । १ नम्वर वडा बाट बग्ने होल्चेको पानी स्याउले र सदरमुकाम चौताराले खाइरहेको छ । अहिले होल्चे सँगै थालखर्कबाट पनि खाने पानी ल्याउने काम भइरहेको छ । यहाँको खानेपानी वडा नम्वर १ का (साविक स्याउले का ९ वडाहरु) सबैमा खानेपानी सहज रुपमा वितरण हुनुपर्छ । साविकको ९ वटै वडाले पानी खान पाउनु पर्छ त्यसपछिमात्र अन्यत्र लान हामीले जाइका र खानेपानी व्यवस्थापन समितिसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं । खनिजको कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय उत्खनन्का कार्यहरु हुन सकेको छैन । यो वडामा थुप्रै तामा र फलामका खानीहरु छन् भन्ने अनुसन्धानले देखाइसकेको छ भने धेरै अघि धाउखानी क्षेत्रमा उत्खनन् भएको पाइन्छ । पछि ध्यान जान सकेको देखिएको छैन । खनिज उत्खनन्मा पनि हामीले ध्यान दिने छौं ।
शिक्षाको हकमा यो वडा धनी छ तर गुणस्तर शिक्षामा चाहिं पछि परेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
हो । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका ज्ञद्ध वडा मध्य वडा नम्वर १ स्याउलेमा (साविक ९ वटै वडामा) निमावी र मावि देखी उच्च माद्यामिक विद्यालयहरु छन् । विद्यालयको हिसावले यो वडा धनी नै छ । तर गुणस्तर शिक्षाको हकमा कमजोर छ भन्ने लाग्छ । गएको कक्षा १२ को परिक्षाको नतिजामा समेत परिणाम आसा गरे अनुरुपको आउन सकेन । मुख्य गरि श्री सेतिदेवी उच्च मावि को विषयमा हामीले सोचेका छौं । वडा नम्वर १ को मुख्य विद्यालयलाई सिष्टममा ल्याउन अब खाँचो म त्यसमा लागिपरेको छु । यहाँका विद्यालयहरुमा शिक्षकको मनोमानी देखिरहेको छ । शिक्षकहरु विद्यालय नआउने, आइहाले पनि शिक्षणमा आलटाल गर्ने जस्ता कमजोरी देखिएको छ । शिक्षकहरुमा आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न गराउन मैले केहि योजनाहरु अघिसार्ने विचार गरेको छु । यस विषयमा शिक्षा अधिकारीसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । शिक्षा नियमावली नआइसकेकाले हामीले अटेर गर्ने शिक्षक लगायत विद्यालयसँग सम्वन्धित विकृती सुधार्न काम गर्न भने शिक्षा नियमावली नआइसकेका कारण अलि अप्ठेरो परेको छ । शिक्षा नियमावली आउनासाथ हामी सबै विद्यालय सुधारमा ध्यान दिनेर्छौं । अहिले पनि सुक्ष्म निगरानी भने हामीले गरिरहेका छौं ।
युरोकप सेमिफाइनल भिडन्त आज : पोर्चुगल र वेल्स भिड्ने